Ngoku ungasebenzisa isikhangeli se-Samsung kuyo yonke "ii-smartphones ze-Android | Iindaba zeGajethi
Ingxilimbela yase-Korea yase-Korea ibhengeze ukuba inguqulelo entsha yesikhangeli sayo, Isikhangeli se-Intanethi se-Samsung, ngoku sinokusetyenziswa kuyo nayiphi na ifowuni nokuba ayenziwanga ngeSamsung.
Ukusukela ngoku ukuya phambili, ukuba ukhathele kukusebenzisa iibrawuza ezifanayo kwi-smartphone yakho ye-Android, unokukhuphela kwaye ufake simahla kwiVenkile yokuDlala. Isikhangeli se-Intanethi se-SamsungNangona kunjalo, ukuze uyisebenzise kufuneka ubenecebo langoku.
1 Sele unesikhangeli esitsha, isiKhangeli seIntanethi seSamsung
2 Njani i-Samsung Internet Browser?
2.1 Imowudi yokwahlula okuphezulu
2.2 Iibhlokhi zentengiso
Sele unesikhangeli esitsha, isiKhangeli seIntanethi seSamsung
Ukudikwa yiChannel, Firefox okanye nasiphi na isikhangeli se-Android? Ukuba kunjalo kwaye une-smartphone yanamhlanje, ungazama isikhangeli se-Samsung kuba inkampani ithathe isigqibo sokuyivula nakweyiphi na i-smartphone yayo nayiphi na into esebenza phantsi kwenkqubo yokusebenza ye-Android.
Kwakungo-Matshi ophelileyo apho isigebenga sase-Korea sase-Korea sikhuphe imiqondiso yokuqala yokuba le nto ingenzeka xa, ekuphenduleni "kwizicelo ezininzi," isungule uhlobo lwe-beta ye-Intanethi ye-Samsung (5.4) ehambelana nezixhobo zikaGoogle. Ukusuka kuthotho lwePixel kunye neNexus. . Ngoku, inkampani iya kwelinye inyathelo kwaye iqala ngohlobo lwesithandathu lwe-beta iyahambelana nayo nayiphi na ifowuni eqhuba i-Android 5.0 Lollipop okanye kamva.
Ezinye iingcali ziyazibuza ukuba kutheni iSamsung ithathe isigqibo sokwenza ukuba ibrowser yayo ihambelane nazo zonke izixhobo, ngakumbi ngexesha apho ubukhulu becala umhlaba ulawulwa yiChannel, Firefox kunye neOpera, ungasathethi ke ukuba akukho bango lubalulekileyo kwisikhangeli esitsha, kude kuyo, isikhangeli esithile seSamsung. Kwaye bayakhumbula ukuba inkonzo ye-Samsung "Music Milk" kwafuneka ivale iingcango zayo kunyaka ophelileyo, kwiminyaka emibini emva kokumiliselwa kwayo.
Njani i-Samsung Internet Browser?
Isikhangeli se-Intanethi se-Samsung Isikhangeli sewebhu sezixhobo ze-Android Isiseko seChromium, Iprojekti yomthombo ovulekileyo esivela kuyo isikhangeli esithandwayo seChannel, kwaye inikezela yonke into elindelwe kwisikhangeli sewebhu ngezi mpawu, umzekelo, vumelanisa nezinye izixhobo (nangona zingezizo izixhobo ezenziwe yinkampani uqobo) okanye ukubanakho ukukhangela ngokungaziwa ngaphandle kokushiya umkhondo wokubulela kwimowudi ye-incognito okanye eyimfihlo. Nangona kunjalo, Isikhangeli se-Intanethi se-Samsung ikwabonelela ngezibonelelo ezithile ezingafumanekiyo kwezinye iinkonzo ezifanayo, kwaye ezinokuthi zinike imali eseleyo endaweni yayo kubasebenzisi abathile.
Imowudi yokwahlula okuphezulu
Isikhangeli se-Intanethi se-Samsung kubandakanya imo yokwahluka okuphezulu enkosi kuyo ukufunda kulula ngakumbi kwaye kuyafikeleleka. Ukujongana noku, inyani kukuba le okanye enye into efana nayo sele ifunyenwe kuninzi lwee-smartphones kunye neetafile, hayi kwizikhangeli ngokwazo. Mhlawumbi, abasebenzisi abanesiphelo sendlela ethile edala kodwa baqhubeke nokukhangela kwesi sikhangeli, baya kuyifumana le nto inomtsalane kwaye iluncedo.
Isikhangeli seInternet seSamsung -Imowudi yokuthelekisa okuphezulu, efanelekileyo yokufunda kunye nokusetyenziswa kwimeko yokukhanya okuphantsi
Ukongeza, ezinye izinto ziyavumela, umzekelo, fikelela kwaye ulawule izixhobo zakho zebluetooth ngebrawuza, ngelixa unikela Inkxaso yewebhuVR kwisikhangeli ngokwaso kuzo zombini iGear VR kunye neKhadibhodi kaGoogle, ezenza ukuba kube lula ukusetyenziswa kwazo.
Intengiso engenayo yingxaki enkulu kwimithombo yeendaba yedijithali yanamhlanje kwaye yeyona nto inomdla kakhulu kuyo Isikhangeli se-Intanethi se-Samsung ngowona msebenzi mkhulu owenziwe yinkampani malunga noku. Esi sikhangeli sinika ukufikelela okukhawulezayo kubhlokhi bomxholo kwaye ivumela abasebenzisi khetha ukuba yeyiphi iiyunithi zentengiso abafuna ukuzibona kwaye zeziphi iwebhusayithi ngendlela ekhawulezayo kakhulu.
Samsung wenze umzamo omkhulu ukuphucula ukufikelela kunye nolawulo blocker umxholo ngabasebenzisi
Umbuzo ngoku ngulo: ngaba konke oku kuyakwanela ukuvusa umdla wabasebenzisi be-Android ukuya kwinqanaba lokuba babenze balahle izikhangeli zabo zangoku? Mhlawumbi hayi kodwa yenza igalelo kwikamva lobuchwephesha beselfowuni. Njenge yalatha UPeter O'Shaughnessy, i-Samsung ayisiyiyo kuphela "ebandakanya amanqaku eChromium, inegalelo kubo nakwimigangatho yewebhu."
Isikhangeli seBeta kwi-Intanethi ye-Samsung
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ngoku ungasebenzisa isikhangeli seSamsung "kuzo zonke" ii-smartphones ze-Android
WONKE uMlawuli, umlawuli wendalo yonke oza kudlala kwikhompyuter kunye nazo zonke izinto ezidibeneyo